Sports lalao an-tserasera
mpankafy ny fanatanjahan-tena sy milalao lalao fanatanjahan-tena maimaim-poana amin'ny aterineto, mahazo amin'ny sokajy ity fifaliana tsy mampino. Fa tao amin'ny tontolo virtoaly dia afaka Ski ny mitaingina eo amin'ny vanin-taona mafana, sy amin'ny ririnina mba hilalao rano volley. Ankoatra ny Eoropa baolina kitra, dia manana tenisy Amerikana voatery kely sy lehibe, azo nilalao baolina Penguins sy tavoahangy mandondòna nidina ny Bowling Alley. Afaka mitaingina ny Bob sy mankafy telo dimensions endriky ny tonelina, mandamina fifaninanana amin'ny fitifirana, mitondra fiara ny milina, mba miangona ao am-peratra sy mandondòna ny filoha Amerikana mba handresy Jackie Chan amin'ny karate.
World Cup Sazy
Sazy Euro 2016
Adama sy Eva Golf
Dunk tonga lafatra
Lalao Sports Games tamin'ny Category:
Farany Sports lalao an-tserasera
Fanamby Ski 3D
Basket & hoditra
3D Kick Free World Cup 18
Mpitifitra Penalty 2
Mamo Spin Punch
Lalao Online Sports lalao an-tserasera
Play ny lalao fanatanjahan-tena mahaliana indrindra amin'ny aterineto!
Ary, na fanatanjahan-tena miresaka amin'ny aterineto. Ao amin'ny vanin-taona mafana mandeha mora tia manao ski ambony sy ny ririnina kilalao volley tora-pasika. Na iza na iza afaka ny ho lasa Tompo any karazana fifaninanana rehetra, ary na dia nikapoka ny firaketana an-tsoratra ny mpifanandrina. Ny zava-nitranga Olaimpika dia hita amin'ny fotoana rehetra, sy ny atleta dia fantatry ny solosaina mpandray anjara, ny mahery fo ny boky tantara an-tsary, TV fampisehoana, tantara an-tsary, ary ny malaza. Aoka mini-lalao fanatanjahan-tena dia tsy hanampy mba fenoy ny asa fanaovan-gazety sy ny sandrin'ny, fa ottochat ny fanehoan-kevitra, ary dia tsara fiomanana ho amin'ny fanombohan'ny asa tena fanatanjahan-tena. Eto dia afaka mahatsapa ihany koa ny toromarika rehetra, ka mifidy fanatanjahan-tena izay anjara amin'ny kafanam-po. Ny simulators dia mitovy ho an'ny ankehitriny fitsipika, ary izany no koa miampy. Fa afaka fotsiny miasa avy mifantoka amin'ny singa tsirairay, toy ny sazy.
Mihazakazaha, mitifitra, manipy, hitsambikina!
Efa tsarintany lafiny rehetra amin'ny lalao fanatanjahan-tena, ary dia azo tendrena ho:
Ririnina sy ny vanin-taona mafana
Noho ny baolina
malaza indrindra amin'ny aterineto lalao fanatanjahan-tena io Football. Mampianatra ao amin'ny fandikana isan-karazany. Izany no mahazatra simulator, izay afaka miara-milalao, na irery hanohitra ny ekipa ny bots tena fitsipika rehetra; eo amin'ny lohan'ny baolina kitra, izay misy ny mpandray anjara hanenjika sy nokapohiny ny baolina eny amin 'ny fampiasana ny lohany tsy misy vatana sy ny tongony; sazy na ny mpiandry harato - toy ny singa amin'ny baolina kitra. Milalao ny mpilalao fanta-daza, Smeshariki, SpongeBob amin'ny fiainana an-dranomasina, Scooby Doo, Mickey Mouse sy ny hafa.
koa ny lalao baolina manolotra fanatanjahan-tena tsy latsa-danja faritra malaza: basket, volley, baseball tenisy, baolina kitra. Ny mahery fo eto ihany koa ny hafa, ka ho mahafinaritra ny miresaka amin'izy ireo mandritra ny fanatanjahan-tena, izay mety ho toa toy ny maoderina, na handray anareo amin'ny vanim-potoana samy hafa niakatra ho any amin'ny Vato Age.
Fa ny mahira-tsaina dia ahitana toromarika chess, lalao karatra billiards sy ny tetezana, mandehana, drafts, Renju - analogue ny noughts sy ny lakroa. Ny fanomezana tombony ho an'ny tsaina adin-tsaina ny ara-batana, dia hahita ny safidy ananantsika ny fahafinaretana, saingy izany no tsara indrindra mifandimby azy ireo tamin'ny faritra mavitrika. Manasa anao ihany koa izahay mba hilalao fanatanjahan-tena hazakazaka, izay any amin'ny hazakazaka. Izany no toerana ny habakabaka sy ny adrenaline! Fiara ny misy famolavolana tsy ampy amin'ny isan-karazany ny kamiao, mpandeha fiara, bisy, traktera, môtô amin'ny bisikileta, môtô, ATVs, sambo, na dia sambon. Drive dia afaka ny ho eny rehetra eny; eo amin'ny peratra dalana, any amin'ny faritra amin'ny toe-javatra voajanahary, ao amin'ny tanàna sy ambanivohitra lalana amin'ny sakana. Raha entinao ao an habakabaka, fiaramanidina milina no hitsoka ny balafomanga ho haingana fa ny kintana nivadika ho lavalava. Izany no misy ny tena fifaninanana atao! Ary raha tia soavaly, hankany amin'ny foko.
Ririnina manolotra fialam-boly vaovao, ary ankehitriny dia afaka Ski eo amin'ny tehezan-tendrombohitra, nanapaka-Skating ranomandry saha sy milalao matoanteny, mba handamina ady amin'ny snowballs, mitifitra azy nivoaka avy ny tafondro, mba solafaka eo ny tsaramaso sy handray anjara amin'ny biathlon.
ny virtoaly tombony fanatanjahantena
Fanatanjahantena dia hampivelatra, Azo antoka ny momba izany. Ao amin'Andriamanitra kosa ny fanehoan-kevitra dia ho tsara kokoa, ianao ho mifantoka kokoa, salama sy mavitrika. Fa raha ny mpanazatra mitaky anao hanafay, amin'ny lalao video manam-bola dia afaka haka aina sy hanafika ny fitsipika. Eny, tsy mba mampihomehy mitantana Bigfoot izay mampiasa Penguins fa tsy ny baolina? Ny raibeny Noely mitaingina snowmobile, ny letaha Bob dia miezaka ny handresy ny hazakazaka, Scooby Doo afa-mandositra avy any amin'ny matoatoa ny kianja, The Simpsons volley nilalao teny amoron-dranomasina, sy ny endri-tsoratra hafa tsy ho lavo any aoriana.